Siyaasad Xumada Wasaarada Waxbarashadu waa masiibo qaran oo ku habsatay ummda reer Somaliland | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on June 21, 2015 by sdwo · No Comments
W/Q: Xasan Ahmed Farah ( Education analyst)
Iyadoo markii horeba ku tukubaysay booc ayay haddana jar ka sii laalaadaa. Waxay noqotay ceelna uma qodna cidna uma maqnaa.
Waxbarashadu waa laf dhabarta horomarka umadda reer Somaliland. Waxa ka lumay jaan goynta qorshaha horomarineed ee ay bulshado u baahnayd sida hirgalinta manhaj tayo leh oo ka turjuma baahida shacabka, qiimayn iyo imtixaan miisaaman oo cadaalada oo ay ardaydu galaan, waxbarasho u suurta galisa ardaygu in ku shaqo tagi karo, tayaynta iyo kor u qaadida aqoonta macalinka si uu tabiyo ujeedada iyo hadafka tacliinta ardayda loo tabinayo.
Ayaan darada jirtaana waxa weeye wasiir leh maxaan macaasha mooye mid leh dalka waxtar wuu yaryahay. Waaba maanta oo loo magaacabay Geedoole oo fooqaq iyo guryo cadcad ka taagay magaalada Hargeisa maanta u soo miciyo lisanaya wasaarad ay umada reer Somaliland wada eeganayaan…..
Ma qorsho xuma mise qiimaha noocyada waxbarashada bulshadu u baahantahay ayaan la tahli Karin?
Ma jiraa siyaasad u taala waxbarashada dalka oo qeexaysa inta arday ee looga baahanyahay dinicyada caafimaadka, beeraha, xisaabaadka, maamulka iyo wixii lamida?
Ma jirtaa siyaad u taala waxbarashada dalka sidii loo jihayn lahaa ardayda aan gudbin imtixaanka mise waa lawada gudbaa oo cidba lama reebo?
Bulsho kastaa iyadaa horomarkeeda, aayaheeda iyo danaheeda ka tashada iyadoo u daba fadhiisata siyaasiga hogaangka u haya.
Ma ictiraafka ayaa soo wada wanaaga qorshe kasta oo horomarineed?
Iyadoo marka horeba la saluugayo ayaa haddana ayaan darada dhacday waxay noqotay in waxbarashadii qaali noqoto oo ay lacag ku lug yeelato oo maanta ardaydu u kala sumcad iyo magac badanyihiin sida:
Iskuul gaara: kaas oo ayna danyartu dhigan Karin inkastuu waxbarasho ahaan aanu waxba dhaamin dawliga
Iskuulka dawlada: bilaashka iyo lacag la’aantu waa tan u horseeday in ay iskuulada dawligu hoos u dhac ku yimi qorshe xumada xukumada iyo ka fiirsasho la’aanta hirgalinta waxbarasho bilaasha.
Waxa inta badan la maqlaa siyaadada waxbarasha 5 sano ee soo socda balse fulinteeda iyo hirgalinteeduba maaha mid ay wax ka jiraan. Waxa sanadba sanadka ka dambeeya sii libin laablaabma ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadaha, dugisiyada sare iyo kuwa dhexeba. Balse ayaan daradu waxay tahay wixii ay barteeni maaha mid ka turjumaya baahida mujtamaca ah taasu oo dhaxalsiisa in ay noqdaan bilaa camal gidaarada tuman.
Waa arday runtii dadaashay balse aan gacan ka helin wasaarada waxbarashada maadaama oo ayna siinin ama hirgalin waxbarashadii ay ku shaqo tagi lahaayeen.